Kooxda Manchester United oo doonaysa inay N’Golo Kante keento garoonka Old Trafford - Hargeele - Wararka Somali State
Kooxda Manchester United oo doonaysa inay N’Golo Kante keento garoonka Old Trafford
(Manchester) 28 Sebt 2020. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysa inay garoonkeeda Old Trafford keento xiddiga khadka dhexe ee Chelsea, N’Golo Kante.
Sida ay warinayso Jariiradda The Mirror, Kooxda Manchester United ayaa wadahadallo la furtay la taliyayaasha N’Golo Kante iyaga oo doonaya in ay heshiis lama filaan ah la gaaraan.
Chelsea ayaa albaabada u furtay inay iska iibiso xiddigan reer France, laakiin Kante ayaa u baahnaan doona inuu sameeyo mushahar dhimis aad u weyn si uu u xaqiijiyo u dhaqaaqista garoonka Old Trafford.
Tababaraha Kooxda Man United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa taageere weyn u ah Kante, waxaana uu rumeysan yahay inuu xoojin karo khadka dhexe ee Red Devils.
Paris Saint-Germain oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddig ka tirsan Kooxda Chelsea
Kooxda Barcelona oo xaqiijisay xiisaha Kabtan Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang
Kooxda Real Madrid oo isku diyaarinaysa inay iibiso Luka Modric & Labada kooxood ee uu midkood ku biiri karo oo la sii ogaaday